Mon Petit Avatar: Mamak stalls - Kuala Lumpur
Posted by Mon Petit Avatar at 8:42 PM
ဒုတိယပုံထဲက ရိုတီက ပွရွနေမဲ့ ပုံလေးဘဲ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ စားချင်လိုက်တာ.. စာဖတ်နေရင်း လက်ဖက်ရည်သောက်လိုက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ Indian curry က အရောင် သိပ်များတယ်နော် .. ဆိုင်လေးကြည့်ရတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး စားချင်စဖွယ်ရယ်။။
Indian Food ဆိုရင်နှစ်သက်တယ်း) အားလုံးစားချင်စရာတွေချည်းပါလား။ ဒီတစ်ပတ်တော့ တစ်ခုခုလုပ်စားမှဖြစ်တော့မယ်။ ကျေးဇူးပါ Mon ရေ။
ဟာ...စားချင်စရာ ရိုတီကကြော်ထားတားမွနေတာပဲ...အနံ့လေးတောင်ရလိုက်သလိုလို ကုလားဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်ဆို သိပ်ကြိုက်တယ် အရမ်းအရသာရှိပြီးမွှေးလို့..။
ပလာတာကို သွားရည်ကျသွားတယ်၊ အိန္ဒိယ လက်ဖက်ရည်နဲ့ဆို ရှယ်ပဲ..။း)
It is no doubt you couldnt avoid Mamak stalls for your daily foods if you live and work in Malaysia, especially in metropolis Kuala Lumpur. I used to rely my neighboring Mamak guys near my office for my lunch almost everyday. It is an ideal place for all-day-round food center for breakfast/brunch/lunch/tea break and dinner.. for meagood place for my vegetarian days. Hehe you would surely fed up if you see an alien tamil guy from tamilnadu cooking Mee Goreng Mamak (Mamak style friend noodle)using the extra Mee Goreng from the previous order to add for your newly ordered food.. :))
curry က အရောင်များပေမယ့် မစပ်ဘူး ချောရေ။ ပြန်မယ့်နေ့ကျမှ curry paste မဝယ်မိတာသတိရတယ်။
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အန်တီတင့်။
တို့လဲ လက်ဘက်ရည်ကိုကြိုက်ပြီးသားဆိုတော့ နေရာမရွေးဘူး မိုးငွေ့လေးရေ။
ပလာတာက မှာမှကြော်တာဆိုတော့ အန်တီပြောသလို မွနေတယ်။ စားလွန်းလို့အပြန်မှာတောင် luggage ထဲထည့်သွားသေးလားလို့မေးတာခံရသေးတယ် အန်တီရေ။
ဟုတ်တယ်ကိုညီလင်းသစ် ပလာတာနဲ့ လက်ဘက်ရည် သိပ်လိုက်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မမရွှေဇင် ရေ။N' joy!
တော်သေးတာပေါ့ အချိန်မရှိလို့ ခေါက်ဆွဲမမှာမိတာ။ကျေးဇူးပါကို AATO ရေ။
ညီမလေးတို့ဆီမှာ ready-made ဝယ်လို့ရမယ်ထင်တယ်။ အမတောင် အထုပ်ဝယ်ထားပြီးမနက်ကတောင်စားလိုက်သေးတယ်။ ဟင်းတွေ ဘာတွေ ဘာမှမပါဘူး သကြားလေးနဲ့ပဲ။